Tanzaniana Efatra Voampanga Noho Ireo Vaovao Politika Nalefany Tamin’ny WhatsApp · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2015 16:54 GMT
Tanzaniana efatra, Leila Sinare, Godfrey Soka, Deo Soka, ary Monica Gaspary Soka, no voampanga araka ny Andininy faha-16 amin'ny Lalàna 2015 momba ny heloka bevava atao amin'ny aterineto, noho ny fandefasana vaovao diso momba ny fifidianana notanterina tao amin'ny sehatra sosialy fandefasan-kafatra WhatsApp. Niakatra fitsarana tao Dar Es Salaam, ao Tanzania izy efatra ireo ny 6 Novambra 2015 teo.
Navoitran'ny mpampanoa lalàna fa ireo voampanga dia namoaka vaovao misy feo tao amin'ny vondrona iray WhatsApp antsoina hoe Soka Group, izay natao mba hamitahana ny vahoaka nandritra ireo fifidianana solombavambahoaka Tanzaniana ny volana Oktobra 2015 teo.
Noforonin'ireo tompon'andraikitra ny Cybercrime Act mba ho fitaovana lehibe hiadiana amin'ny vetaveta mamoafady amin'ny ankizy, fandrahonana amin'ny aterineto, fisandohana anaran'olona ety amin'ny aterineto, votoaty manavakavaka sy mankahala vahiny, ireo hafatra tsy misy niriana (i.e. spam), fipaingorana tsy ara-dalàna ny fifandraisana, ary fandefasana vaovao tsy marina. Nolaniana tamin'ny volana Aprily tamin'ity taona ity ilay lalàna ary nosoniavin‘ny Filoha Jakaya Kikwete ho lalàna manan-kery ny volana May 2015, na teo aza ny tsikera avy amin'ireo mpanao politika mpanohitra, ireo mpisehatry ny media sosialy, ary ireo mpiaro ny zon'olombelona.
Mivaky toy izao ny hafatra niampangàna azy ireo ho naparitany :
Ho an'ireo namana ato amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra ara-politikanay, tsy ilàntsika fifampirariana fifidianana mahafinaritra izany, satria ny firenentsika efa latsaka sahady anaty korontana amin'ny fotoana rehetra ato ho ato dia hivadika ho faritry ny ady. Marina fa efa tafiditra ao anaty ady izy noho ireo baoritra telo feno vato hosoka azo tao amin'ny biraom-pifidianana Vunjo. Nahita baoritra telo hafa ihany koa izahay tao amin'ny tananàn'i Moshi, enina tao Ilemela ary baoritra 12 tao Hanang.
Raha fintinina, efa nikorontana ny fifidianana. Henoko ireo fiara voalaza fa feno vato hosoka voasakana tao Tanga ary narahan'ireo mpifehy antsika ry zareo ireo, ary hatramin'izao dia tsy milamina ny toe-draharaha. Nandrotsaka vato hosoka maro be ny CCM [antokon'ny fitondrana], ary tsy maintsy lazaiko satria vokatr'io toe-draharaha io, tsy ho avotra isika, tsy avotra satria efa nanomboka namono tanora tao Mwanza ry zareo, efatra no maty ary dimy miady amin'ny fahafatesana… CCM, azafady, miangavy anareo izahay mba hiala tsy misy maratra eto amin'ny firenenay, mety ho vonoinareo amin'ny poizina izahay dia honjohonjonareo irery sisa no eo, aza ampijaliana izahay, aza ampijaliana izahay.
John Magufuli, kandidà avy amin'ny Chama Cha Mapinduzi (CCM), antokon'ny fitondrana Tanzaniana, no nambaran'ny kaomisionan'ny fifidianana ho mpandresy tamin'ny fifidianana na teo aza ireo filazàna hosoka tamin'ny fandahatsaham-bato sy ireo antso mitaky ny hamerenana ny fanisàna nataon'ny mpanohitra. Nandresy tamin'ny vato 58,46% izy, raha toa ka ny vaton'ny kandidà mpanohitra, Edward Lowassa nahazo 39,97%.
Mitondra aminà fiampangàna mitovy momba ny fanelezana vaovao momba ny hosoka tamin'ny fifidianana nataon'ny antokon'ny fitondrana CCM sy ny herisetra tamin'ny fifidianana tany amin'ireo faritra samihafa teo amin'ny firenena ny vaovao niampangana ireo olona efatra ireo. Nandà ho tsy tompon'antoka ireo olona efatra ireo. Voalahatra hiseho fitsarana izy ireo ny 3 Desambra 2015 izao.
Tsy vao Tanzaniana voalohany voampanga tamin'ilay lalàna vaovao nampisy adihevitra be akory ireto voampanga ireto. Ny Tanzaniana voalohany niharan'ny lalàna raha vao lany tao amin'ny parlemanta Tanzaniana io dia i Benedict Angelo Ngonyani, 24 taona, mpianatra tao amin'ny Ivontoeran'ny Teknolojia ao Dar es Salaam. Voampanga izy tamin'ny 9 Oktobra, fa namoaka zavatra izay nolazain'ireo mpampanoa lalàna fa “hosoka na tsy voamarin'ireo tomponandraikitra mahefa” tao aminà lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook, izay nilaza fa niditra hopitaly vokatry ny fihinanana sakafo voapoizina ny Lehiben'ny Hery Fiarovana Tanzaniana, Jeneraly Davis Mwamunyange, Milaza ireo manampahefana fa nandefa an'io vaovao io i Ngonyani na nahafantatra aza fa diso.
Nalaina am-bavany tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao amin'ny faritr'i Dodoma i Sospiter Jonas ary voaheloka vokatry ny “fampiasàna tsy ara-drariny ny Aterineto”. Nandefa hafatra tamin'ny pejy Facebook-ny izy nilaza fa “ho lasa mpitory filazantsara fotsiny” ny praiminisitra Mizengo Pinda
Maneho hevitra ireo mpikatroka mafàna fon'ny fahalalahana maneho hevitra fa omen'ny lalàna fahefana be loatra – tsy misy fanarahamaso matotra – ny mpitandro filaminana, toy ny fahafahana misava ny tranon'ireo ahiahiana ho mandika lalàna, maka ny fitaovana elektronikany, ary mangataka ny angon-drakitra avy amin'ireo manome tolotra amin'ny aterineto. Nampahafantatra ihany koa izy ireo fa ny mpitandro filaminana na ny fanjakana dia afaka mampiasa ny fahefan'izy ireo mba hilàna vaniny amin'ireo mpikatroka mafàna fo amin'ny aterineto na ireo mpampiasa media sosialy.
Amin'ireo firenena Afrikana 12 aty ambanin'i Sahara nokilasian'ny Freedom House ao anatin'ny Tatitr'izy ireo momba ny Fahalalahan'ny Aterineto 2015, 2 no voasokajy ho malalaka, 3 tsy malalaka ary ny ambiny malalaka amin'ny ampahany ihany. Tsy tafiditra tao anatin'ny tatitra kosa i Tanzania.